संक्रमित पत्रकार भन्छन्- 'आइसोलेसनबाटै पनि काम गर्न सकिन्छ'- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
'राज्यले आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्दै जाने हो भने सेल्फ आइसोलेसनमै बसेर पनि रोग जित्न सकिन्छ ।’
जेष्ठ २०, २०७७ सन्जु पौडेल
तिलोत्तमा — खुला नाकामा मानिसको आवागमन बढेको थियो । उनी स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीसहित सामाजिक दुरी कायम गरेर समाचार संकलनमा खटिएका थिए । क्वारेन्टाइन भरिने क्रम जारी थियो । जिल्लामा भारतबाट फर्किएका स्थानीयमा संक्रमण बढ्न थाल्यो । त्यसै क्रममा आफूलाई संक्रमणको शंका लागेर उनले स्वाब परीक्षण गराए ।
पहिलो रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । केही दिन ढुक्क भए । आफूसँगै रिपोर्टिङमा हिँड्ने साथी संक्रमित भएपछि उनले फेरि परीक्षण गराए । त्यसपटक भने उनमा संक्रमण पुष्टि भयो ।
‘जेठ ५ गते घरमै बसेर यशोधरा गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका २४ संक्रमितका बारेमा समाचार लेख्दै थिएँ,’ कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाका ३६ वर्षीय उनले भने, ‘त्यही बेला नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले फोन गरेर संक्रमण देखिएको जानकारी गराउनुभयो ।’
उनी एक साताअघि नै सेल्फ आइसोलेसनमा बसिसकेका थिए । लगत्तै श्रीमतीलाई आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराए । ‘श्रीमतीले चिन्ता मान्नु पर्दैन भनेर ढाडस दिइन्,’ उनले भने, ‘उनले नै कपडा राखेर झोला ठिक पार्दिइन् ।’ आफूसँग सम्पर्कमा रहेका सबै साथीलाई खबर सुनाएर सतर्क रहन उनले अनुरोध गरे । नगरपालिकाले एम्बुलेन्स तयार गरे पनि उनी आफैंले मोटरसाइकल हाँकेर बुटवल पुगे । तर उनले आइसोलेसनमा ठाउँ पाएनन् । देवीनगरस्थित एन्फा एकेडेमीमा बनाएको आइसोलेसन सेन्टरबाहिर ३ घन्टा उल्झनमा बिताएको उनी सुनाउँछन् ।
‘मलाई पत्रकार साथीबाटै सरेको हो । तर, ती साथी कसरी संक्रमित भए भन्ने अझै बुझ्न सकिएको छैन,’ उनले भने । संक्रमितसित टाढाबाट बोले पनि सर्छ भन्ने भ्रम हटाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘घरमै आइसोलेसनमा बस्ने मन थियो,’ उनले भने, ‘समाजमा अझै यसबारे भ्रम रहेकाले यहाँ आएको हुँ ।’
उनका ७ वर्षका छोरा र ३ वर्षीया छोरी छन् । छोराछोरीलाई आफू संक्रमित भएको जानकारी दिएका छैनन् । ‘छोरी भने फोनमा कुरा गर्छिन्,’ उनले भने, ‘कहिले फर्किनुहुन्छ भनेर सोध्छिन् ।’ भावनात्मक हिसाबले कोरोना मात्र नभई सबै रोगले कमजोर बनाउने उनले अनुभव गरेका छन् ।
कोरोना जोखिम सुरु भएपछि कपिलवस्तुका क्वारेन्टाइन र सीमामा अलपत्र सर्वसाधारणको अवस्थाबारे रिपोर्टिङमा खटिएका सदरमुकामका अर्का पत्रकार अहिले कार्यालयमै सेल्फ आइसोलेसनमा छन् । यशोधरा गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनको अवस्था बुझ्न गएका बेला संक्रमण सरेको उनको अनुमान छ । ‘गत जेठ ९ गते बिहान संक्रमित भएको जानकारी पाएँ,’ उनले भने, ‘कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालयमा रहेका बेला कहाँ आइसोलेसनमा बस्ने भन्नेबारे अन्योल भयो ।’ स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्न खोज्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नमिलेको उनले बताए । ‘त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गररे कार्यालयमै बस्ने निधो गरेँ,’ उनले भने, ‘परिवारले घरमै बस्न मिल्ने वातावरण तयार गरे पनि छिमेकीले जानकारी पाएपछि गरेको व्यवहार सम्झेर जान मन लागेन ।’ सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न थालेपछि र बाहिरी सम्पर्क टुटेपछि छिटो निको हुने आत्मविश्वास बढेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कार्यालयमा अन्य कर्मचारी पनि छन् । ‘५ मिटरसम्म दुरी राखेर छलफल र गफ हुन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्दै जाने हो भने सेल्फ आइसोलेसनमा बसेर पनि रोग जित्न सकिन्छ ।’ आइसोलेसनमै बसेर पनि आफ्नो नियमित काम गर्न सकिने उनले बताए । उनीहरू संक्रमित हुँदासम्म जिल्लामा एउटै आइसोलेसनको व्यवस्था थिएन ।
कपिलवस्तुकै महिला सञ्चारकर्मी पनि बुटवलस्थित एन्फा एकेडेमीको आइसोलेसनमा बसेकी छन् । गत वैशाख २२ गते मायादेवी गाउँपालिकामा समाचार संकलनका लागि गएकी थिइन् । त्यस क्रममा भारतबाट फर्किएका व्यक्तिसित कुराकानी भएको थियो । उक्त क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्ति संक्रमित पाइए । सिमानाका क्वारेन्टाइनमा गएको हुनाले उनले पनि स्वाब परीक्षण गराइन् । गत जेठ १० गते स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो ।
‘थाहा पाउनेबित्तिकै त मन भरियो,’ उनले भनिन्, ‘साथीभाइको फोन, अग्रजले गरेको काउन्सिलिङले सम्हालिएँ ।’ स्वाब संकलन गरेको केही दिन भइसकेको थियो । रिपोर्ट आउन ढिलो भयो । त्यसपछि घर, नजिकैको माइतीघर र कार्यालय गरिरहेकी थिइन् । ‘म संक्रमित भएपछि आमा बढी भावुक हुनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘आफैंले सम्झाएर आइसोलेसनमा आएकी हुँ ।’ कपिलवस्तुबाट बुटवल आएर आइसोलेसनमा बस्न सहज भने भएन । बिहान ९ बजे उनलाई संक्रमणबारे जानकारी भयो । त्यस दिन राति १० बजेमात्रै उनलाई बुटवलस्थित धागो कारखानामा रहेको कोरोना अस्पताल ल्याइयो । त्यो रात त्यहीँ बिताइन् ।
बिहान उठेर व्यायाम, खाजा खाइसकेपछि सामाजिक दुरी कायम गरी त्यहीँ रहेका अन्यसँग गफगाफ र घरपरिवारसित संवाद गरेर समय बितिरहेको उनले बताइन् । ‘यहाँ केही निराश भएर बसिरहने साथी हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले हँसाउने गरेका छौं ।’ उच्च आत्मबल नै कोरोना जित्ने उपाय भएको महसुस गरेको उनले सुनाइन् । उनीसँगै रिपोर्टिङमा गएका प्राविधिक कर्मचारी पनि अहिले आइसोलेसनमा छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ १७:१९
एनएमसीको आन्दोलन चर्कियो
जेष्ठ २०, २०७७ फातिमा बानु
काठमाडौँ — ड्युटीमा रहेका चिकित्सकमाथि हातपात भएपछि जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजका(एनएमसी)का चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग राख्‍दै उनीहरुले ६ दिनदेखि अस्पतालको आकस्मिक बाहेक सबै सेवा ठप्प पारेका छन् । हातमा कालोपट्टी बाँधेर उनीहरु अस्पतालमै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
जेठ १४ गते उपचारको क्रममा ५४ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएपछि लापारबाही भएको भन्दै बिरमी पक्षले डा.श्रीकुमार श्रेष्ठ र डा.राकेश सिंहलाई कुटपिट गरेका थिए । बिरामी नै अन्तिम अवस्थामा अस्पताल ल्याएकाले बचाउन प्रयास गर्दागर्दै मृत्यु भएको डा. श्रेष्ठले बताए । ‘बिरामीलाई क्रोनिक दमको समस्या थियो, रातभरि छटपटाएपछि बिहान अस्पताल ल्याएको हिस्ट्री दिनुभएको थियो,’ उनले भने,‘यस्तो बिरामीलाई तुरुन्त उपचार नपाए जोखिम नै हुने हो,हामीले हेरेको एक घण्टा बित्‍न नपाउँदै बिरामीको नाडी चल्न छोड्यो ।’
बिरामीलाई श्वासप्रश्वासको समस्या र ज्वरो भएकाले कोभिड परीक्षणका लागि स्वाब लिने भन्न खोज्दा बिरामी पक्षले कुटपिट गरेको उनले बताए । ‘आफू उपचार गर्न नजान्ने अनि कोरोनालाई दोष दिने’ भन्दै उनलाई घाँटीमा हाने । भाग्‍न खोज्दा रडले ढाडमा समेत हाने र भागेर ज्यान जोगाएको उनले सुनाए । ‘भागेर बाहिर जाँदा उनीहरु डेढ सय जति मान्छे अस्पतालमा बोलाइसकेका थिए,’ डा.श्रेष्ठले भने,‘बिरामी मार्यो भन्दै हामीलाई आक्रमण गरे ।’ कोभिडसँग जुधेर जोखिम मोल्दै काम गरिरहेको बेलामा हातपात गर्दा चिकित्सा पेशाप्रति नै वितृष्णा जागेको उनले सुनाए । घटना भएकै दिन दोषीमाथि कारबाही गरियोस् भन्दै उनीहरु महानगरीय प्रहरी वृत बौद्धमा उजुरी दर्ता गराउन जाँदा भोलिपल्टसम्म उनीहरुको उजुरी प्रहरीले दर्ता गरेन ।
घटनास्थलमा पनि चिकित्सकले कुटाइ खाइरहँदा सुरक्षाकर्मीले मुखदर्शक भएर बसको आन्दोलनरत चिकित्सकहरुको आरोप छ । नेपाल चिकित्सक संघको दबाबमा मात्रै प्रहरीले उजुरी दर्ता गरेको छ । अपराध अनुसन्धान महाशाखाले घटनाको जाँचबुझका लागि सीसीटिभी फुटेजको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
आन्दोलन फिर्ता गर्ने दबाब दिँदै स्थानीयले चिकित्सकलाई धम्काउने, हप्काउने गरिरहेको आन्दोलनरत चितित्सकले बताए । अस्पतालकै मिलेमतोमा चिकित्सकमाथि अन्याय भइरहेको उनीहरुको आरोप छ ।
‘चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बिरामीको ज्यान गुमेको हो भने हामी कारबाही भोग्न तयार छौं,’एक चिकित्सकले भने,‘होइन भने सत्यतथ्य पत्ता लगाएर जो दोषी हो कारबाही नभएसम्म हामी आन्दोलन गरिरहन्छौं,’ एनएमसीको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै अहिले देशका विभिन्‍न अस्पतालका रेसिडेन्ट चिकित्सक आफू कार्यरत स्वास्थ्य संस्थामा आन्दोलन गरिरहेका छन् । घटनाको अनुसन्धानका लागि एसपी सर्वेन्द्र राथौठको संयोजकत्वमा छानबिन कमिटी बनेको अस्पतालले जनाएको छ ।
कोभिड १९ को संक्रमणसँग जुधेर काम गरिरहेका चिकित्सकमाथि हातपात हुँदापनि दोषी कारबाहीको दायरामा नआउँदा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिरेको उनले बताए । यस्तो समयमा समेत स्वास्थ्यकर्मी कुटिनु निन्दनीय भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।‘काम गर्दागर्दै चिकित्सकमाथि हातपात भएको छ,’संघका महासचिव डा. बद्री रिजालले भने,‘महामारीको बेलामा आन्दोलन गर्नु राम्रो होइन, दोषीमाथि कारबाही होस् ।’
चैत २१ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ड्यूटीमा खटिएका चिकित्सकमाथि हातपात भए बर्दीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात भएजत्तिकै कानूनी कारबाही हुने उल्लेख छ । यो निर्णय लागू गर्न संघले अस्पतालमै पुगेर दबाब दिइरहेको डा. रिजालले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ १७:१६
प्यूठानमा पुग्यो सलहको झुन्ड